Xiriirka UEFA oo soo diiday codsigii Booliska Ingiriiska ee ahaa in la bedelo xilliga la ciyaarayo kulanka England iyo Czech Republic – Gool FM
(Yurub) 08 Okt 2019. Xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA ayaa soo diiday codigii Boolkiska UK ee ahaa in la bedelo taariikhda la ciyaarayo kulanka dhex mari doona xulalka England iyo Czech Republic.
Booliska Ingiriiska ayaa ka cabsi qaba in Taageerayaasha xulka saddexda libaax ay rabashado geystaan kulanka Jimcaha ka dhacaya Magaalada Prague ee caasimada Czech, kaasoo ka tirsan Guruubka A.
Waxa ay Ingiriisku codsadeen in kulanka la bedelo habeenka Jimcaha ah oo laga dhigo bartamaha todobaadka si ay u yaraadaan taageerayaasha safri kara, maadaama ay tahay todobaad shaqo ah.
Masuul u hadlay Booliska UK oo la yiraahdo Mark Roberts ayaa yiri: “Waxaan warqad u qornay UEFA taasoo aan ku weysiinayno inay bedelaan kulanka habeenka Jimcaha, balse waa ay awoodi waayeen inay bedelaan.”
“Waxaan qabaa inay nasiib-darro tahay sababtoo ah waxaa la sii arki karaa halista ka imaan karta, waxaan jeclaan lahayn inaan xaalad ka hortagno bedelkii aan ka qoomamayn lahayn markii ay wax dhacaan.”
Si kastaba ha ahaatee, Taageerayaasha xulka qaranka England ayaa dhibaato ka abuurtay kulammadii saaxiibtinnimo ee Amsterdam iyo Dortmund & Ciyaarihii ay la ciyaareen Portugal ee UEFA Nations League, waxaana Boolisku ay hadda codsadeen in laga hortago rabashadaha ay geysan karaan Jamaahiirta xulka saddexda Libaax.